▷ Prime Day na Laptọọpụ: azụmahịa kacha mma nke 2022!
Amazon na-eme ememe ụbọchị Prime Prime ya nke afọ ọzọ, mmalite nke Black Friday na nnukwu nchịkọta azụmahịa nke laptọọpụ na agbanyeghị na anyị amaghị kpọmkwem ụbọchị ememme, n'oge na-adịghị anya ọ ga-eburu n'uche ihe omume nke afọ ndị gara aga.
N'ime oge a, anyị ga-agwa gị maka ire na mbelata ego niile na-emetụta laptọọpụ. Ị ga-ahapụ ha ka ha gbapụ
N'okpuru ị nwere nhọrọ nke Laptọọpụ na-ere ahịa tupu Prime Day 202. N'ezie, anyị ga-emelite ndepụta na ahịa nke afọ a ma ọ bụrụ na azụmahịa ọhụrụ pụtara.
N'ime onyinye ndị bụ isi, anyị na-ahụ mbelata na-atọ ụtọ na kọmpụta nke ụdị niile, na-akọwapụta ihe ndị a:
1 Ahịa kacha mma na laptọọpụ HP maka ụbọchị Prime Day
2 Ire Laptọọpụ LG kacha mma maka ụbọchị Prime Minister
3 Ahịa kacha mma na laptọọpụ Acer na Prime Day
4 Ahịa kacha mma na Asus na Prime Day
5 Ahịa kacha mma na laptọọpụ Huawei maka ụbọchị Prime Day
6 Ọnụ ahịa kacha mma na laptọọpụ MSI maka ụbọchị Prime
7 Ụbọchị Prime bụ ezigbo ụbọchị ịzụta laptọọpụ?
8 Ụbọchị Prime Minister ma ọ bụ Black Friday ọ ka mma ịzụta laptọọpụ?
9 Ọ ga-abụrịrị na m ga-abụ onye isi ka m nweta mbelata ego ndị a?
10 Kedu otu anyị siri chịkọta ọnụ ahịa laptop ndị a maka ụbọchị Prime Minister?
Ahịa kacha mma na laptọọpụ HP maka ụbọchị Prime Day
HP bụ ụdị laptọọpụ ọzọ nwere nnukwu azụmahịa maka ụbọchị Prime. Nke a bụ nhọrọ nke onyinye na-arụsi ọrụ ike ugbu a:
Ire Laptọọpụ LG kacha mma maka ụbọchị Prime Minister
A ma ama maka ịmepụta akwụkwọ ndetu dị mfe maka ndị na-achọ ibugharị
Ahịa kacha mma na laptọọpụ Acer na Prime Day
Ọ pụtara maka uru ọ bara maka ego, ebe ọ dị mfe ịchọta kọmpụta dị ike nke nwere ọnụ ahịa dị n'okpuru nkezi.
Ahịa kacha mma na Asus na Prime Day
Onye nrụpụta a na-enye nnukwu katalọgụ nke kọmpụta nke ụdị niile, ma egwuregwu, ọkụ ma ọ bụ n'okporo ụzọ nwere ezigbo uru maka ego.
Ahịa kacha mma na laptọọpụ Huawei maka ụbọchị Prime Day
Laptọọpụ HUAWEI MateBook...
Ọ bụrụ na ịchọrọ MacBook nwere Windows, ụlọ ọrụ China na-enye nhọrọ ndị na-adọrọ mmasị maka ndị na-achọ laptọọpụ nwere ọdịdị mara mma na nke ọma.
Ọnụ ahịa kacha mma na laptọọpụ MSI maka ụbọchị Prime
Egwuregwu egwuregwu kacha mma, bụ nke a na-eji na-enye laptọọpụ dị ike maka ndị na-achọ ịrụ ọrụ kachasị. Dị ka kọmpụta ndị a na-adịkarị ọnụ, Prime Day bụ oge zuru oke iji nweta ya na ọnụ ahịa mbelata nke ukwuu.
Dịkwa ka anyị kwuburu, ị ga-ahụ ụdị kọmpụta ọ bụla ka ị nwee ike ịhọrọ ọkụ, ihe na-eguzogide ọgwụ, egwuregwu ma ọ bụ ụdị dị elu. Ha niile ebelatala ọnụ ahịa ha ma nwee ike zụta ọnụ ala karịa ka ọ dị na mbụ.
Prime Day 2021 amalitelarị ma anyị enweelarị onyinye mbụ. Lọghachite ebe a n'ime ụbọchị ole na ole ka ịchọta mbelata ego laptop kacha mma maka ndị otu Amazon Prime
Buru n'uche na ọtụtụ n'ime ihe ndị a ga-adị maka obere oge, mee ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na azụmahịa ọ bụla na laptọọpụ anyị na-atụ aro ebe a.
Anyị na-adọkwa gị aka na ntị na ka Amazon Prime Day na-adịru, anyị ga-eji ihe ọhụrụ emelite tebụl kwa ụbọchị. Site na June 21, 2021, anyị ga na-agwa gị maka mbelata ọnụahịa kacha amasị gị iji nweta kọmpụta dị ọnụ ala.
Ụbọchị Prime bụ ezigbo ụbọchị ịzụta laptọọpụ?
Obi abụọ adịghị ya. Amazon na-agba mbọ mgbe niile ịnye ọtụtụ laptops na-ere n'oge Prime Day, yabụ na ọ gaghị ekwe omume ka anyị chọta nke dabara na njirimara na mmefu ego anyị na-eji.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ laptọọpụ ka ọ rụọ ọrụ, iji mụọ ma ọ bụ chọọ ịmegharị kọmputa ochie gị: ị ga-ahụ nke ị na-achọ.
Ụbọchị Prime Minister ma ọ bụ Black Friday ọ ka mma ịzụta laptọọpụ?
Nke bụ eziokwu bụ na ihe omume abụọ a bụ oge dị mma iji nweta laptọọpụ ego efu. Prime Day na-abụkarị obere ike ike na ahịa karịa nhọrọ nke Black Friday na-akwụ ụgwọ laptọọpụ Mana ịhụ nnukwu katalọgụ nke onyinye emere na 2020, nkwupụta ahụ na-esiri anyị ike idowe.
N'afọ a, enwere ezigbo ego ị na-agaghị echefu. Na mgbakwunye, uru nke ụbọchị Prime Prime nke afọ a na-eme na June bụ na ọ gaghị ejikọta ya na Black Friday, yabụ onyinye a ga-adị mma karịa afọ gara aga. Obi abụọ adịghị ya, Prime Day bụ oge zuru oke iji zụta laptọọpụ dị ọnụ ala.
Ọ ga-abụrịrị na m ga-abụ onye isi ka m nweta mbelata ego ndị a?
Ụjọ na-atụ m. Amazon na-enye gị oge ikpe n'efu nke ụbọchị 30, yabụ na ị ga-emepụta akaụntụ email ọhụrụ wee debanye aha ka ị nwee ike ịnụ ụtọ uru a.
Cheta ịkagbu mmeghari ohuru nke Prime ozugbo oge ikpe gwụchara, ma ọ bụghị ya, a ga-ana gị ụgwọ kwa afọ n'agbanyeghị na ị ga-enwe ọtụtụ uru dị ka mbupu n'efu n'ime awa 24, egwu, Prime Video na ndị ọzọ.
Anyị na-atụ anya na site na ndụmọdụ a, ihe achọrọ ịbụ onye ọrụ Prime abụghị ihe mgbochi iji nweta laptọọpụ mbelata na Prime Day.
Kedu otu anyị siri chịkọta ọnụ ahịa laptop ndị a maka ụbọchị Prime Minister?
Ọrụ anyị doro anya: inyere gị aka ịzọpụta.
Ebe ọ bụ na anyị bụ ndị ọkachamara pụrụ iche ma a bịa n'ịdụ ọdụ ịzụrụ laptọọpụ, ọrụ anyị n'oge Prime Day bụ ịnakọta onyinye kachasị mma ka ị nwee ike ịhụ ha niile n'otu ebe na ile anya.
Weebụsaịtị Amazon anaghị enye gị iwu ka ị na-enye onyinye ego kacha elu, nke anyị na-eme ma ọ bụ na-eme ka ndị na-adọrọ mmasị pụta ìhè n'ihi na ọ bụ laptọọpụ na-anaghị ewetukarị ya.
N'ụzọ dị otú a ị nwere ike inwe ezigbo ntụnyere nke laptọọpụ niile na-enye na Prime Day na ngwa ngwa họrọ ụdị ịchọrọ.
Ị chọrọ ịhụ mbelata ego niile na Amazon Prime Day?.
Soro anyị na Facebook na anyị ga-agwa gị na ọhụrụ enye
Mee ka m mara na mbelata na laptọọpụ
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Mgbidi » Ụbọchị Mbụ